Orinasa Jirama : Raikitra ny fanarenana -
AccueilSongandinaOrinasa Jirama : Raikitra ny fanarenana
Orinasa Jirama : Raikitra ny fanarenana
Miasa andro aman’alina. Izay no azo hilazana ny eo anivon’ny orinasa mpamatsy herinaratra, Jirama, amin’izao fotoana izao. Araka ny fantatra mantsy, nanomboka ny 9 Marsa teo, taorian’ny fandalovan’ilay rivodoza Enawo, nidina ifotony nijery ny fahasimbana amin’ireo fitaovana mitondra sy mamatsy herinaratra ireo teknisianin’ny Jirama.
Raha ny fanazavana azo tamin’ny tompon’andraikitra, maro dia maro ny fahasimbana tamin’ireo faritra maro manerana ny Nosy tamin’ny fandalovan’ny rivodoza teo iny. Izay indrindra no nahatonga ny fahatapahan-jiro sy rano tamin’ireo faritra maro. Noho izay indrindra, nanomboka ny 9 Marsa teo no efa niezaka nanamboatra ireo fitaovana ny orinasa Jirama. “Mbola ao anatin’ny fanarenana tanteraka ireo simba sy tra-pahavoazana isika amin’izao fotoana izao. Tsy mora ary tsy ho vita vetivety anefa izany saingy, ezahinay ny hahatomombana haingana ny famatsiana herinaratra. Ankoatra izay, tsy delestazy velively ny fahatapahan’ny jiro tato ho ato fa vokatry ny fahasimban’ny fitaovana maro”, hoy hatrany ny tompon’andraikitra.
Ho an’Antananarivo sy ny manodidina manokana, nanazava ity tompon’andraikitra ity fa nahatratra 43 ireo andrin-jiro simba tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo ary efa ao anatin’ny fanarenana tanteraka ny teknisianin’ny orinasa Jirama. “Noho ny fanamboarana ireo tra-pahavoazana dia tsy maintsy misy ny fanelingelenana haterak’izany amin’ny famatsiana herinaratra”, hoy hatrany ny fanazavana.
Ankoatra izay, maro dia maro ihany koa ny fitarainana voarain’ny orinasa Jirama amin’izao fotoana izao. Nanazava izy ireo fa tsy azo atao ambanin-javatra ireo fitarainana voaray ary efa miezaka mamaha ny olana rehetra amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny famatsiana herinaratra faran’izay haingana ny Jirama.
Noheverina fa tena hiady amin’ny kolikoly tokoa ny Bianco, indrindra ny tale jeneraly Jean Louis Andriamifidy tamin’ireny fihetsiketsehana sy sinema goavana nataony nandritra ny raharaha Claudine Razaimamonjy sy ny raharaha Antenimieram-pirenena ireny saingy… Mitanila Voalaza ...Tohiny